Xog: Qorshe uu Robow ku shaacin rabay in uu doorashada ka tanasulay oo fashilmay! ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Xog: Qorshe uu Robow ku shaacin rabay in uu doorashada ka tanasulay...
Xog: Qorshe uu Robow ku shaacin rabay in uu doorashada ka tanasulay oo fashilmay!
Waxaa Fashilmay qorshe la doonaya in uu Muqtaar Roobow ku shaaciyo in uu ka tanaasulay doorashada KG Soomaaliya kadib markii ay mushklado isku afgaran wayay sida uu Abuu Mansuur u shaacinayo in uu tanaasulay madaama uu yahay nin aan xuriyad laheyn oo maxmuus ah.
Qorshahan ayaa waxaa kasoo shaqeeyey mas’uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ee dowladda ku jira, kuwaasi oo doonayey in Roobow uu helo xoriyaddiisa, taas beddelkeedna uu ka haro doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Xog lagu kalsoon yahay oo ay heshay soomaaliweyn.net ayaa sheegaya in qorshuhu ka koobanaa seddax qodob oo ay arrintan quseyo mid walba uu helo waxa uu doonayo, sidaasna sheekada Roobow lagu soo gababa gabeeyo.
1 = Dowladda waxay heli lahayd in Roobow uu ka haro doorashada, sidaasna ay Koonfur Galbeed u gaysato Lafta-Gareen, maadaama Roobow halis xooggan geliyey.
2 = Muqtaar Roobow waxa uu heli lahaa xoriyaddiisa, waxaana laga saari lahaa xabsiga, oo la qorsheeyey inuu ku jiro, haddii uusan sameyn sida ay rabto dowladda.
3 = Siyaasiyiinta Koonfur Galbeed waxaa ka degi lahaa cadaadiska xooggan ee ka haysta dhanka shacabkooda ee ah in Roobow la daayo, si loo dejiyo xaalada Baydhabo.
Xilli uu heshiisku saas u dhacay, islamarkaana warbaahinta looga wacay shir jaraa’id oo uu qaban lahaa Roobow, ayaa qorshaha waxaa sida aan xogta ku helnay daqiiqadihii ugu dambeeyey ka baxay dowladda Soomaaliya.
Ilaa iyo haatn lama oga sida uu ku dambeyn doono xaalka Roobow oo looga baxay heshiis uu ku shaacin lahaa arin muhiim ah, waxaa sidoo kale la sheegayaa in dowladda ay ka cabsatay in marka Roobow uu warbaahinta hor-tago uu is-beddelo oo uu sheego wax ka duwan waxa lagu heshiiyey.
Warbaahnta ayaa waxaa lagu mashquuliyay hoowlo kale oo gaaba gaabey ah sida xiritaanka xabsiga godka Jielcow oo horayba u ahaa go’aan degsan oo waqtigisu sugayay waxaana loo soo hormariyay qaab siyaasadeed si looguna daboolo arinta Abuu Mansuur oo fashlantay.
Previous articleNin baahan nin buko wax looguma dhiibo! (Daawo shaqalahan)
Next articleWasiir ka tirsan DF oo isku casilay xisadaha Koonfur Galbeed!